UWillie noChristina Geist Bahlangane eBangeni Lesithupha. Eminyakeni engama-33 kamuva, Nakhu ukuthi bakwenza kanjani ukuthi kusebenze - Isiko
UWillie noChristina Geist Bahlangana eBangeni Lesithupha; Eminyakeni engama-33 kamuva, Nakhu ukuthi bakwenza kanjani ukuthi kusebenze
I- NgeSonto Namuhla umphathi nomlobi wencwadi yezingane on crushes esikoleni samabanga aphakathi, amashejuli angapheli, nokubhekana nezinselelo zokuphila ndawonye.
I-NBC / The Today Show
Ubani owawuthanda othile ebangeni lesithupha? Mhlawumbe kwakuyingane yomugqa ongemuva evela ku-homeroom noma i-spelling bee champ. Ugcine nini lowo muntu ukucabanga — noma ngisho nokwaziswa kwakho? Ngoba NgeSonto Namuhla umphathi uWillie Geist nomkakhe, New York Times umbhali wencwadi yezingane othengiswa kakhulu uChristina Geist, bekungu, oh, emasekhondini amane edlule.
Lo mbhangqwana wahlangana esikoleni esiphakathi, kanti ngenkathi impilo ibayisa ezinhlangothini ezihlukile, indawo yonke yabaphindisela emuva. AbakwaGeists manje sebeshadile kusukela ngo-2003 futhi banezingane ezimbili: uLucie, 12, noGeorge, 10. Laba bobabili banemisebenzi emibili edingayo. UChristina, 44, unamabhizinisi amabili futhi ungumbhali we Uxolo Abantu Abadala, Awukwazi Ukuya Esikoleni! , edonsela ekugengeni ngobuhlakani akusungulele ukwenza indodakazi yakhe ijabule ngokuqala isikole, ikubeka njengento ekhethekile kuphela yena uthola ukukwenza.
NoWillie, 44, owayekade ehlala ndawonye isikhathi eside Ekuseni uJoe , is fixing in is groove ivuliwe NgeSonto Namuhla -Lapho ehweba khona ngezepolitiki ezinamadrama aphezulu zamanje ababhali bemidlalo yeshashalazi. Kuze kube manje usexoxisane nabadlali abafana noBill Murray, uJerry Seinfeld, uDavid Letterman noTiffany Haddish.
unkulunkulukazi eluka izinwele zezinwele nge-weave
Ngenkathi amashejuli abo edinga ukusebenzisana okuningi futhi izimpilo zabo zinezingxenye eziningi ezihambayo, ukubambisana kwabo kunamandla kunanini ngaphambili. Lapha, abakwaGeists basigcwalisa ngokuthi bakwenze kanjani ukuthi kusebenze kusuka esikoleni esiphakathi kuya (amagama abo!) Iminyaka ephakathi.
Kwesinye isikhathi wena can yahlulela incwadi ngekhava yayo.
UWillie Geist: Sobabili safunda eGeorge Washington Middle School eRidgewood, eNew Jersey. Ngosuku lokuqala, uChristina wayenenqwaba yabangane basesikoleni samabanga aphansi, kuyilapho ngangiyingane entsha evela kolunye uhlangothi lwedolobha, ngimi ngedwa ngithwebula igumbi. Futhi ngiyazi kuzwakala njengomlando wokubuyekeza, kepha lokhu kuyiqiniso. Ngikhumbula ngempela ngicabanga ebuchosheni bami obuneminyaka engu-11 ubudala, O, ubukeka emuhle futhi epholile. Futhi kuvela ukuthi benginguye kwesokudla - ngoba lokho kwakwenzeka eminyakeni engama-33 edlule, futhi sishade nezingane.
uzenza kanjani izinwele zakho zibe zinde
UChristina Geist: Ngiyayikhumbula nami. Kuyasangana, kodwa ngibona sengathi uWillie wayehlale evelele. Ungubanoma yiliphi igumbi ahamba kulo, zombili ngoba ujwayele ukuba mude kunabantu abangama-95%, kodwa futhi ngoba uyiloluhlobo lomuntu ukunakwa okushintshela kuye ngokwemvelo.
Thembela emathunjini akho.
UWillie: Sithandane kafushane phakathi nonyaka omusha wabantu abasha esikoleni esiphakeme. Ngangidlala eqenjini lebhola futhi nganginethawula elincane elalilengiswa ebhulukweni lami futhi ngangifuna ukubhala igama likaChristina kulo — kodwa ngenza izinhlamvu zokuqala zaba zinkulu kakhulu, ngakho-ke ngokuyisisekelo lalithi 'Kristu' bese ngibe nokuncane ' ina 'ekhoneni, ngoba ngiphelelwe isikhala. Kwagcina kubukeka njengentela kuJesu kunentombi yami eneminyaka eyi-14. Ngakho-ke nguyena owahlukana nami, ngoba uma ubona abafana abanezimoto, ufana nokuthi, 'O, ungumuntu oneminyaka engama-14 ubudala onamahloni' noKristu 'ethawula lakhe.'
Sibuye ndawonye unyaka omncane, sabe sesiya eVanderbilt ndawonye. Kepha ngemuva kwekolishi ngathola umsebenzi e-Atlanta yena waya eBoston. Sazizwa ngathi, 'Uma sizohlukana futhi sibone ukuthi umhlaba unjani ngaphandle kwalokhu, kubonakala sengathi lesi yisikhathi sokwenza lokhu.' Ngakho senze iminyaka embalwa futhi ngiyakhumbula ngizwa izinto ngomvini ukuthi wayethandana nomunye umuntu. Futhi bekufanele ngilunge ngalokho, ngoba lelo bekuyiphuzu layo yonke le nto. Kepha ngemuva kwesikhathi esithile bengicabanga, ngiyazi enhliziyweni yami ukuthi lo ngumuntu engifuna ukuba naye. Uma besivele sidlule kulo msebenzi wokuhlukana ngenxa yokwehlukana, futhi ngizomlahlekisela ngalokho, lokho akwenzi mqondo. Ngazithola ngizama ukumbuyisela emuva futhi ngenze isiqiniseko sokuthi akasuki.
UWillie noChristina Geist ngesikhathi somdlalo webhola eRidgewood High School
Ngokuzithoba kukaWillie noChristina Geist
UChristina: Lapho sifika ekolishi, saba nomuzwa wokuthi bekufanele sihlukane ngoba yilokho okufanele ukwenze, kodwa akuzange kunamathele impela. Lapho-ke lapho siqeda khona izinto ngemuva kwekolishi, kwakuyinto efanele ukuyenza. Bengingakaze ngibe seqenjini kusukela ngineminyaka engu-16 lapho ngangingeyona 'intombi kaWillie.' Ngangihlangana nabantu ababengamazi, futhi lokho kwakubalulekile ukusungula ubuwena. Kodwa enhliziyweni yami wayezoba nguyena impela obalekile. Ngiyabonga ukuthi akekho noyedwa wethu owayeziqhenya kakhulu eneminyaka engama-25 ngenkathi sicabanga ukuthi singabuyelana kanjani futhi siphumelele. Kufanele uzibuke esibukweni ngezikhathi ezithile empilweni yakho bese uthi, 'Yini ebaluleke kakhulu lapha?' Kimina, lokho bekuhlangene.
Khumbula: Akuwona umncintiswano.
UWillie: Ngaqala ukwenza Ekuseni uJoe ngo-Ephreli 2007, futhi indodakazi yethu yazalwa ngoJuni ka-2007. Ngakho-ke bengilokhu ngivuka phakathi kwamabili selokhu saba nezingane. Kwakunzima ngaleso sikhathi, ngenxa yezizathu ezisobala, ikakhulukazi ngenkathi sinengane yesibili futhi ngangiphuma ngehora lesine ekuseni kanti uChristina wayenengane ekhalayo futhi omunye emdonsa emlenzeni. Kodwa besilokhu sinesivumelwano: UChristina unezikhathi zokusa, futhi ngikhona ebusuku. Izinkumbulo zezingane zami ngami ngethemba lokuthi sizodla nazo, sizifundele izincwadi, futhi sibe lapho nesikhathi sokugeza lapho siseyizinsana. Futhi siyabhekelana. Kuzoba ngathi, 'Nginayo le nto kusihlwa, ungazilanda izingane?' Ngizothola izimemo ze-Outlook ezivela kuChristina ezingitshela ukuthi ngicosha ku-ballet namuhla, futhi ngifana nokuthi, 'Kulungile, kusekhalendeni.' Kufanele udonse isisindo sakho.
UChristina: Olunye ucezu lwalo ukugcina amaphuzu. Uma uqhathanisa ukuthi ubani onamandla kakhulu manje, lowo ngumdlalo wokuhlulwa.
UWillie noChristina bathatha izithombe besendleleni yokuphromotha.
amathuluzi okuzivikela kwabesifazane
Yazi uma sekuyisikhathi sokwenza ushintsho
UChristina: Kwesinye isikhathi kufanele ubuke umlingani wakho emehlweni bese uphephezelisa ifulegi elimhlophe. Sakwenza lokho lapho izingane zineminyaka emithathu neyodwa. UWillie waqala ukwenza uhlelo lwe-TV lwangaphambilini [olwaqala ngo-5: 30 ekuseni], futhi sasizoba nengane yesibili. Ngaphumelela ngalowo nyaka wokuqala, ngabuyela emsebenzini ngemuva kwekhefu lokubeletha — kodwa lapho izingane sezineminyaka emithathu nanye, ngambheka ngathi, 'Ngizoyeka.' NgangikuJohnson & Johnson, emsebenzini omuhle futhi nginesimo sokwakha ngempela, kepha besisikhulu kakhulu. Lokhu kunamandla lapho bekungathi sobabili ngaleso sikhathi sifana, 'Kulungile, asenze lesi sinqumo njengamanje, futhi sizosivumelanisa nesinyathelo ngasinye.'
Imayelana nohambo, hhayi lapho uya khona.
UChristina: Lona umdlalo omude. Besilokhu sibambisene empilweni kusukela emncane kangaka kusukela-kudala ngaphambi kokuba nezingane noma ukuthola imisebenzi esinayo manje-futhi sizoba ngabalingani ngakolunye uhlangothi lwayo. Ngakho-ke siyakwazi ukuyeka futhi sazise lezi zigaba. Njengeqiniso lokuthi sisendaweni emnandi nezingane lapho zikhona empeleni funa ukuzihlalela nathi. Ngakho-ke njengamanje sibeka phambili ukuba nabo phezu 'kobusuku bosuku.' Ngingabheka emuva ngibonge ibanga esesilihambile, futhi ngingabheka phambili kuzo zonke izahluko eziza ngomgwaqo.
imibono yokubhoboza izindlebe kwabesifazane
UWillie: Kuhlekisa ngempela uChristina. Kimi lokho kuyisici sokuhola, nayo yonke into engemva kwalokho i-gravy. Ngoba lapho izikhathi ziba nzima, besilokhu sisebenzisa amahlaya ukudlula kukho. Kwenzeka okuthile okuhlekisayo futhi ukujabulele nentombazane oyibone ngaphesheya kwegumbi ebangeni lesithupha, okunguyena umuntu othemba ukuthi uzoba yiminyaka engama-33 kamuva.
Ungabuka NgeSonto Namuhla noWillie Geist ngeSonto ngo-8 ekuseni ET futhi uthenge incwadi yakamuva kaChristina lapha .
Ibiza malini i-laser
Amathrendi ombala wezinwele wasebusika we-2020
akukho bra yezintambo ngokusekelwa
uhlu lwamafilimu athokozisa ngokwengqondo